Booba waxay la wadaagaysaa macluumaad qosol badan oo ku saabsan tallaalka Covid-19 - teles relay
Booba waxay la wadaagaysaa macluumaad qosol badan oo ku saabsan tallaalka 'Covid-19'
Emmanuel Macron wuxuu goor dhow ka hadli doonaa tallaalka ka dhanka ah Covid-19. Dhanka kale, Booba ayaa faallo ka bixinaysa war ku saabsan. Wuxuu u muuqdaa mid ka naxsan "wararka".
Sheekadiisa Instagram, wuxuu markaa noogu soo bandhigayaa shaashad maqaal ah oo ka socota Mail Online. Faahfaahin aan macquul ahayn.
Booba wuxuu markaa muujinayaa cinwaan aad u xiiso badan: "Dadka Ingiriiska ah ee laga tallaalay Covid waxay ka heli karaan lambarrada QR taleefannadooda casriga ah [...] inay ka qayb galaan cayaaraha kubbadda cagta".
Meghan Markle wuxuu doonayaa inuu shaaciyo siraha yar ee qoyska boqortooyada
Haddaba waa maxay arrintani? Halkii laga dhigi lahaa tallaalka mid khasab ah, cinwaankani wuxuu soo jeedinayaa dadka reer Britain in la abaalmarin doono haddii la tallaalo, sida lagu sheegay war ay wadaagaan Booba.
Waa hab wanaagsan oo loogu dhiirrigeliyo kuwa la nacay inay u baxaan tallaalka… Haa, waan ognahay in ka dhigista tallaalka mid khasab ah uusan run ahaantii qancinayn qof walba.
Halkan waa halka uu ku dambeeyay saaxiibkii hore ee DJ Arafat oo in muddo ah ku dhuumanayay
Sidoo kale waa xorriyad ay dad badani diidaan inay bixiyaan: taas oo ah ikhtiyaar ikhtiyaar ah ama aan la tallaalin. Haa, dhaqankani ma aha oo kaliya kuwa raacsan, qaarna wali shaki ayey ku jiraan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday kii ugu horreeyay: https://afriqueshowbiz.com
Era verdaderamente El Diablo de Nayarit - Video
Kylie Jenner, Keanu Reeves, Chris Hemsworth stars Xiddigahan gadaal u laaban taageerayaashooda! - Video